တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီ CATL သည် မကောင်းသော ကောလာဟလ များကို ငြင်းဆို ခဲ့သည် - Pandaily
Feb 14, 2022, 12:51ညနေ 2022/02/14 14:04:52 Pandaily
တရုတ် ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီ Contemporary Ampere Technology Co., Ltd (CATL) နှင့်ပတ်သက်သော ကောလာဟလ များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒီယာ ပလက်ဖောင်း များပေါ်တွင် မကြာသေးမီက ပေါ်ထွက် လာခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ စတော့ရှယ်ယာ ဈေး နှုန်းသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ၁၇% ကျဆင်းခဲ့သည်။ဤ အစီရင်ခံစာများ-ဤအရာ အားလုံးကို CATL မှ ငြင်းပယ် ခဲ့သည်-ကုမ္ပဏီ ဟာ အမေရိကန် ရဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု အသစ် တွေနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရပြီး ChiNext အလေးချိန် ရှိတဲ့ စတော့ရှယ်ယာ အညွှန်းကိန်း ကနေ ဖယ်ရှား ခံ ရမှာဖြစ်ပြီး တက် စ လာ နဲ့ ပူးပေါင်း ဖို့ အလားအလာ ရှိတဲ့ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းမှု တွေမှာ မအောင်မြင် ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
“ကုမ္ပဏီ ၏ တရားဝင် အခွင့်အရေး များ ကို ကာကွယ် ရန် ၊ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ လ ၁၂ ရက် နေ့ တွင် ၊ ကျွန်တော် တို့ သည် ပြည်သူ့ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ သို့ တရားဝင် အစီရင်ခံ ခဲ့ ပြီး ၊ ကောလာဟလ ပြုလုပ် သူ များ ၏ ဥပဒေ အရ တာဝန်ယူ မှု ကို ဥပဒေ နှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေး လိမ့်မည်” ဟု CATL ၏ ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ခု တွင် ဖော်ပြခဲ့သည် ။ ဒီ စြပ္စြဲ ခ်က္ေတြဟာ အႏု ၾကမ္း စီး တဲ့ စြပ္စြဲ ခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ တက် စ လာ သည် CATL နှင့် ညှိနှိုင်းမှု မအောင်မြင် ကြောင်း ကောလာဟလ များကိုလည်း ငြင်း ဆိုခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် CATL သည်ကမ္ဘာ့ ဘက်ထရီ ဈေးကွက်တွင် အကြွင်းမဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ် နေဆဲဖြစ်သည်။ တနင်္လာနေ့တွင် တောင်ကိုရီးယား စျေးကွက် သုတေသန အဖွဲ့ SNE မှ ထုတ်ပြန်သော နောက်ဆုံး စာရင်းဇယား များအရ ၂၀၂၁ တွင် CATL သည် ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ဝေစု ၃၂. ၆% ဖြင့် မော်တော်ယာဉ် ဘက်ထရီ များကို အကြီးမားဆုံး ပေးသွင်း သူအဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည် နေပြီး ပထမ နေရာတွင်ရှိသည်။ CATL သည် ၅ နှစ် ဆက်တိုက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စွမ်းအင် ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:CATL ငါး ဆက်တိုက် ချန်ပီယံ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပါဝါ ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူ
ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီက ခန့်မှန်း ထားသည်၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အသားတင် အမြတ် ငွေ ၁၄ ဘီလီယံမှ ၁၆. ၅ ဘီလီယံအထိ ရှိသည်(ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ-ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံ) ၊ တစ္ႏွစ္ ထက္ တစ္ႏွစ္ ၁၅၀ ဒသမ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း မွ ၁၉၅ ဒသမ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ျမင့္တက္လာ ျခင္းသည္ ေလ့လာဆန္းစစ္ သူမ်ား၏ ယခင္က ေမွ်ာ္မွန္း
သို့သော် CATL ၏ပြ ိုင် ဘက် များသည် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာ သည်။ ရှန်ကျန်း အခြေစိုက် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ BYD သည် ဘက်ထရီ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီ များစွာကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အချို့မှာ အများပြည်သူ သိရှိ ရန်စီစဉ် နေကြသည်။ BYD သည် နိုင်ငံခြား လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ် သူများအတွက် ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ထားသော blade batteries များကိုထောက်ပံ့ ရန် တွန်းအားပေး နေသည်။ စျေးကွက် တွင်ပါ ၀ င် သူများက BYD သည် အနာဂတ်တွင် Tesla ၏ ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်း သူ ဖြစ်လာ လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့် ကြသည်။
စာရင်း မသ ွင်း ရသေး သော China Lithium Power Technology သည် ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် စွမ်းဆောင်ရည် ရည်မှန်းချက် ၅၀၀ GWh ကိုအဆိုပြု ခဲ့ပြီး CATL မှ GAC Aion မှ အမှာစာ အချို့ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Getie Hi-Tech နှင့် Swater ကဲ့သို့သော ဒုတိယ ဝါယာကြိုး ဘက်ထရီ စက်ရုံ များသည်လည်း အမီလိုက် ရန် ရုန်းကန် နေရသည်။